ဒီတပတ် English Learning: America Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေပန်းစားတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းတချို့ ဖြစ်တဲ့ Lame duck, The last hurrah နဲ့ Days are numbered အီဒီယံတွေကို တင်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပလို့ ပြန်ရွေးချယ် မခံရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရှိသလို၊ သက်တမ်းအကန့်အသတ်ကြောင့် ရာထူး တာဝန်ကုန်ဆုံးခါနီးအခြေအနေ ရောက်နေတဲ့ပု၈္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်သမတ Barack Obama ဆိုရင် သမ္မတ သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ ၊ သက်တမ်းအကန့် အသတ်ကြောင့် ၂၀၁၆ ဟာသူ့ ရဲ့သမတသက်တမ်း နောက်ဆုံး နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာသမတရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ သမတလောင်း ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပြီးရာထူးလက်ခံ တဲ့၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့အထိ Mr. Obama အနေနှင့် သမတရာထူးမှာဆက်ထမ်းဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုရာထူးသက်တမ်းမှာသိပ်ကြာကြာ မထမ်းဆောင်ရတော့ဘူးလို့ သေချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို နိုင်ငံရေးလောကမှာ ဘယ်လို အမေရိကန်သုံး အီဒီယံတွေနှင့်တင်စားသုံးနှုန်းသလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Lame (မသန်မစွမ်းဖြစ်တာ)၊ duck (ဘဲ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မသန်မစွမ်းဖြစ်တဲ့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lame duck ဆိုတဲ့အသုံး ဆင်းသက်လာတာကတော့ (၁၈) ရာစု ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီး ဒေဝါလီခံကြရတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးသုံးခဲ့တာကစခဲ့တာပါ။ ငှက်လိုက်ပစ်ရာမှာ ပစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ ငှက်ဟာ ဒဏ်ရာရပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ တင်စားပြီး၊ ဒေဝါလီခံရတဲ့ အခြေစိုက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအနေနဲ့လည်း ဘာမှ ဆက်လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိကြတော့ အခြေအနေမျိုးကို ဒီ အီဒီယံနဲ့ တင်စားသုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ ဘဲထော့ကျိုး၊ အတောင်ကျိုးတဲ့ငှက်နဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ သာမန်လုပ်ကိုင်နေကြလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့တဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအသုံးဟာ နောက်ပိုင်းမှာ စီးပွားရေး ကနေ နိုင်ငံရေးလောကဖက်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီး ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြန်အရွေးချယ်မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနှင့်ကိုယ့်နေရာမှာအစားထိုးမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သက်တမ်းလည်း မစနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ၊ လက်ရှိတာဝန်မှာဆက်ပြီးအချိန်အကန့်အသတ်တာဝန်ယူနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ Lame duck ကိုရည်ညွှန်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ ကိုယ့်နေရာမှာအစားထိုးမယ့်လူမလာနိုင်သေးတဲ့ကာလအတွင်း အဲဒီရာထူးမှာဆက်ပြီးတော့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ပေးနေရတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်စောင့်ပေးနေရတဲ့ သဘောမျိုး။ မီးစာကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ လက်ရှိရာထူးမှာ ဆက်မနေရတော့ဘူးဆိုတာ သေချာနေတဲ့လူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Asalame duck Governor, he won't be able to do much for his state withafew months left.
ပြန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း မခံရတဲ့ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးအနေနဲ့ သူ့ပြည်နယ်အတွက် ကျန်တဲ့လ အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ ဘာမှမယ်မယ်ရရ လုပ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
(၂) The last hurrah
The Last (နောက်ဆုံး)၊ hurrah (သြဘာသံ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကနောက်ဆုံးသြဘာသံ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ လူတဦးအတွက် သူ့ ရာထူး၊ သူ့ လုပ်ငန်းမှာနောက်ဆုံးအကြိမ် နှုတ်ဆက်ပွဲကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ရာထူးတာဝန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ပု၈္ဂိုလ် တွေစသဖြင့်ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းတော့မယ့် အခြေအနေမျိုးကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေအနေနှင့် အနားမယူမီ နောက်ဆုံးဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ နှုတ်ဆက်သြဘာပေးကြတာကိုလည်း The last hurrah လို့ ရည်ညွှန်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
After serving six terms the Congressman said this term was his last hurrah!
အောက်လွှတ်တော်အမတ်သက်တမ်း ခြောက်ကြိမ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ဒီတကြိမ်ဟာ သူ့ ရဲ့နောက်ဆုံးသက်တမ်းပါလို့ လွှတ်တော်အမတ်က ပြောခဲ့တယ်။
(၃) Days are numbered
Days (ရက်တွေ)၊ are numbered က (ရေတွက်တာ) ဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က ရက်တွေကိုလက်ချိုးရေတွက်လို့ ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ သိပ်ကြာကြာမခံတော့တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ လူတဦးအနေနဲ့ သူ့ရာထူးသက်တမ်းကုန်ခါနီးလို့ ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းလို့ ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်၊ လက်ရှိအခြေအနေမှာသက်တမ်းသိပ်မကြာကြာမနေရတော့တာ တနည်း မီးစာကုန်ဆီခမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Since the Mayor was not re-elected, his days are numbered. He will leave office when the new Mayor takes over.
မြို့ တော်ဝန်အနေနဲ့ ပြန်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်း မခံခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့သက်တမ်းကတော့ လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရနေပြီ။ နောက် မြို့ တော်ဝန်သစ်လာတဲ့အခါ၊ သူရာထူးကနေဆင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Elections ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများက Lame duck, The last hurrah နဲ့ Days are numbered တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။